October 9, 2021 - Channel Lover
သားဖြစ်သူအတွက် ယူကြုံးမရစွာ ငိုကြွေးနေတဲ့ မင်းသားကြီး ရှရွတ်ခန်းရဲ့(ဗွီဒီယိုဖိုင်)
October 9, 2021 by Channel Lover
Shah Rukh Khan နှင့် Gauri Khan တို့ရဲ့ သားဖြစ်သူ Aryan Khan ကို မူးယစ်ဆေးဝါးအမှုနဲ့ NBC မှ ထိန်းသိမ်းထားခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ Aryan ရဲ့ မိခင် Gauri က သူမသားဖြစ်သူ ထောင်ထဲကနေလွတ်လာဖို့ အသည်းအသန်ကြိုးစားနေပေမယ့်လည်း အဆင်မပြေဖြစ်နေတယ်လို့ သိရပါတယ်။ အန်တီ Gauri က တရားရုံးထဲကနေ ငိုလျှက်ထွက်လာပြီး သူမရဲ့ သားဖြစ်သူအတွက်ယူကြုံးမရ ပုံစံဖြစ်နေပါတယ်။ ဗီဒီယိုထဲမှာ အန်တီ Gauri က အင်္ကျီအဖြူရောင်နဲ့ ဂျင်းဘောင်းဘီ အပြာရောင် ဝတ်ထားပါတယ်။ သူမက ကားထဲမှာ ဆက်လက်ငိုကြွေးနေပြီးနောက် ထွက်ခွာသွားပါတယ်။ သားဖြစ်သူ Aryan Khan ရဲ့ အမှုအတွက် အာမခံတင်သွင်းတာ ပယ်ချခံလိုက်ရတာကြောင့် အခုလိုမျိုးဝမ်းနည်းပတ်လတ်ငိုကြွေးနေတာဖြစ်တယ်လို့ သုံးသပ်ထားကြပါတယ်။ … Read more
အစိမ်းရောင်)မန်ကျည်းသီးမှ (အနီရောင်)သို့ပြောင်းသွားခြင်း စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ မြင်းမူမြို့နယ်၊ ထီးဆောင်းကျေးရွာမှာ မန်ကျည်းပင်ကသီးတဲ့ မန်ကျည်းသီးတဲ့ဗျာ ။ ခါးပိုင်းကနေကိုင်ပြီး ချိုးကြည့်လိုက်ရာ “ရဲရဲကိုနီတွတ်” နေပါသည် ။ မယုံ၍နောက်တစ်တောင့်အား ဆက်ပြီးချိုးကြည့်ရာ ထိုကဲ့သို့ ရဲရဲနီတွတ် နေပြန်ပါသည် ။ တစ်သက်နဲ့တစ်ကိုယ်ဒီတစ်ခါဘဲကြားဘူးပါသည် ။ အတိတ်ပေလား? နိမိတ်တွေလားတော့ မပြောတတ်ပါဗျာ…။ စာဖတ်ပရိတ်သတ်ကြီးတွေရဲ့ အမြင်ကိုလည်း ရေးခဲ့ပေးကြပါအူး . . . ။ source ထီးဆောင်းကျေးရွာမှ ဒေသခံ လူတစ်ဦး credit unicode အစိမျးရောငျ)မနျကညျြးသီးမှ (အနီရောငျ)သို့ပွောငျးသှားခွငျး စဈကိုငျးတိုငျးဒသေကွီး၊ မွငျးမူမွို့နယျ၊ ထီးဆောငျးကြေးရှာမှာ မနျကညျြးပငျကသီးတဲ့ မနျကညျြးသီးတဲ့ဗြာ ။ ခါးပိုငျးကနကေိုငျပွီး ခြိုးကွညျ့လိုကျရာ “ရဲရဲကိုနီတှတျ” နပေါသညျ ။ မယုံ၍နောကျတဈတောငျ့အား ဆကျပွီးခြိုးကွညျ့ရာ ထိုကဲ့သို့ ရဲရဲနီတှတျ နပွေနျပါသညျ … Read more
အပါယ်ခံဖြစ်နေရှာတဲ့ PDF လူငယ်လေးရဲ့ ၀မ်းနည်း စိတ်မကောင်းစရာ အဖြစ်
PDFနဲ့သိရင် အဖမ်းခံရမှာစိုးလို့ဆိုပြီး သူငယ်ချင်းတွေက စကားမပြောတော့ဘဲ ရှောင်ဖယ်နေတာကြောင့် ဝမ်းနည်းခံစားနေရတဲ့ PDFလူငယ်လေး မြန်မာလူငယ်လေးတွေကတော့ အပင်ပန်းခံပြီး တောတောင်တွေထဲ သွားရောက်ကာ စစ်ပညာကို သင်ကြားနေကြပါတယ်။ ယခုလိုစွန့်လွှတ်အနစ်နာခံနေတဲ့ PDFလူငယ်လေးတွေကို သားသမီးချင်းကိုယ်ချင်းစာပြီး အားပေးထောက်ခံနေကြတဲ့ ပြည်သူတွေရှိသလိုအဖမ်းခံရမှာစိုးတာကြောင့် PDFလူငယ်တွေကို ရှောင်ဖယ်နေကြတဲ့ ပြည်သူတွေလည်းရှိပါတယ်။ ယခုမှာတော့ PDFလူငယ်လေးတစ်ယောက်ဟာ တောတောင်တွေထဲ သွားရောက်ပြီး တိုက်ပွဲဝင်နေချိန်မှာအသိမိတ်ဆွေအချို့ရဲ့ ခွဲခြားဆက်ဆံခြင်းကို ခံနေရကြောင်း ပြောပြလာခဲ့ပါတယ်။ ချစ်ခင်ရသူတွေ၊ လေးစားအားကျရသူတွေ၊ ခင်မင်ရတဲ့ သူငယ်ချင်းတွေက PDFတစ်ယောက်နဲ့ သိလို့ဆိုပြီး အဖမ်းခံရမှာစိုးတာကြောင့် သူ့ကိုစကားမပြောတော့ဘဲ ရှောင်ဖယ်နေကြကြောင်း အဆိုပါPDFလူငယ်လေးက ဖွင့်ဟထားခဲ့ပါတယ်။ အဆိုပါလူငယ်လေးက သူလည်းခံစားတတ်တဲ့ အသွေးနဲ့အသားနဲ့ တည်ဆောက်ထားတဲ့ သာမန်လူငယ်တစ်ယောက်ဖြစ်တာမို့ ယခုလိုရှောင်ဖယ်ခံရတာကြောင့် စိတ်မကောင်းဖြစ်ပြီး ခံစားနေရကာ ခံပြင်းနေခဲ့ပါတယ်။ ခက်ခဲပင်ပန်းမှုတွေနဲ့ အစွမ်းကုန်အားတင်းနေရတဲ့ ယခုလိုအချိန်တွေမှာ ချစ်ခင်ရသူတွေဆီက အားပေးစကားက ဘာနဲ့မှ … Read more
ရုပ်သံကို အောက်ဆုံးတွင် ဖော်ပြထားပါသည်..။ ဒီပဲယင်းတွင် စစ်ကောင်စီ စစ်ကြောင်းနှင့် ယာဉ်တန်းကို ဒီပဲယင်း PDFက မိုင်းဆွဲ တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီး စစ်ကောင်စီ တပ်ဖွဲ့ဝင် ၁၂ဦးထက်မနည်းသေဆုံး (ရုပ်/သံ) ဒီပဲယင်းမြို့နယ် အုန်းတပင်ကျေးရွာနှင့် ပုဂံကျေးရွာကြားမှာ ကျေးရွာများ အတွင်း ဝင်ရောက်ကာ ပြည်သူပိုင် ပစ္စည်းများအား လုယက်နေသည့် အကြမ်းဖက် စစ်ကောင်စီ စစ်ကြောင်းနှင့် ယာဉ်တန်းကို ဒီပဲယင်း ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့က မိုင်းဆွဲ တိုက်ခိုက်ခဲ့ခြင်းကြောင့် အကြမ်းဖက် စစ်ကောင်စီ တပ်ဖွဲ့ဝင် ၁၂ဦးထက်မနည်းသေဆုံးကြောင်း ဒီပဲယင်း PDF အဖွဲ့က သိရသည်။ ဒီပဲယင်း PDF တပ်ဖွဲ့သည် အကြမ်းဖက် စစ်ကောင်စီ စစ်ကြောင်းနှင့် ယာဉ်တန်းကို ၂ကြိမ်မိုင်းခွဲ တိုက်ခိုက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီး ပထမအကြိမ် တိုက်ခိုက်မှုသည် အုန်းတပင်ကျေးရွာနှင့် ပုဂံကျေးရွာကြားတွင် ခြေလျင်ချီတက် လာသည့် … Read more
ပွဲအသစ်အတွက် အောင်လရဲ့ ဂတိနဲ့ ကြုံးဝါးသံ
ပရိတ်သတ်ကြီးရေ မြန်မာ့ဂုဏ်ဆောင် လက်ဝှေ့ချံပီယံအောင်လအန်ဆန်းဟာဆိုရင် အခု စင်္ကါပူမှာရောက်ရှိနေပါတယ်နော် သူကတော့ ဂျပန်နိုင်ငံသားအိုဆာကာ နဲ့ ယှင်ပြုင်ထိုးကြဖို့ အစီအစင်တွေ ရှိထားပြီး လေ့ကျင့်မှုတွေလဲ နှစ်ဆတိုးပြီး လေ့ကျင့်ထားပါတယ်တဲ့နော် အခုစင်္ကါပူမှာ ခေတ္တအနားယူနေချိန်မှာတော့ စင်္ကါပူက သူ့မိတ်ဆွေမိသားစုတွေနဲ့ ပျော်ပျေည်ရွှင်ရွှင်ရှိနေခဲ့ပြီး သူ့ရဲ့သားလေးမှာအဖော်ရလို့ ဝမ်းသာနေခဲ့ပါတယ် ကလေးတွေရဲ့ချစ်စရာပုံလေးတွေကိုလဲလူမှုကွန်ယက်မှာတင်ခဲ့ပါသေးတယ် အခုတခါယှင်ပြိုင်ထိုးသတ်မဲ့ပွဲမှာတော့ တဖက်ကပြိုင်ဖက် အိုဆာကာရဲ့ မျက်လုံးထဲမှာ happy new year ရောက်သလိုမျိုး မီးရှူးမီးပန်းများဖြာကျစေရမယ်လို့လဲ ပရိတ်သတ်ကိုကတိပေးသွားပါသေးတယ်ဗျာ ပြိုင်ပွဲရက်အတိအကျကိုတော့ ကိုဗစ်အခြေအနေအအတည်ပြုပြောဆိုထားခြင်းမရှိသေးပေမယ့် ရက်အတိအကျကိုထပ်မံတင်ပြပေးသွားပါမယ်လို့လဲပြောသွားပါသေးတယ်ဗျ credit unicode ပရိတျသတျကွီးရေ မွနျမာ့ဂုဏျဆောငျ လကျဝှခြေံ့ပီယံအောငျလအနျဆနျးဟာဆိုရငျ အခု စင်ျကါပူမှာရောကျရှိနပေါတယျနျော သူကတော့ ဂပြနျနိုငျငံသားအိုဆာကာ နဲ့ ယှငျပွုငျထိုးကွဖို့ အစီအစငျတှေ ရှိထားပွီး လကေ့ငျြ့မှုတှလေဲ နှဈဆတိုးပွီး လကေ့ငျြ့ထားပါတယျတဲ့နျော အခုစင်ျကါပူမှာ ခတ်ေတအနားယူနခြေိနျမှာတော့ စင်ျကါပူက သူ့မိတျဆှမေိသားစုတှနေဲ့ … Read more
နာရေးကူညီမှုအသင်ကို စစမှဖျက်စီးပြီးနောက် ဦးကျော်သူရဲ့အခြေအနေ
ပရိတ်သတ်ကြီးရေ၊ အခုတစ်ခါမှာဆိုရင်တော့ သရုပ်ဆောင်ကျော်သူက ရုပ်ရှင်သရုပ်ဆောင်အလုပ်အကြောင်းနဲ့ သုဘရာဇာအလုပ်အကြောင်းကို အခုလိုပြောပြလာခဲ့ပါတယ်နော်။ သရုပ်ဆောင်ကျော်သူက ကိုရီးယားမှာပေါ့ဗျာ၊ အကယ်ဒမီရုပ်ရှင်သရုပ်ဆောင်ဖြစ်တယ်လို့ ကိုရီးယားလို မိတ်ဆက်ပေးတော့ ပြုံးပြလေရဲ့၊ ရုပ်ရှင်လည်းရိုက်တယ်၊ အသုဘလည်းချတဲ့ကုသိုလ်ဖြစ် သုဘရာဇာလို့လည်းမိတ်ဆက်ပေးရော ပြုံးပြယုံတင်မကတော့ဘူး အတင်းလက်ကိုဆွဲကိုင်ဖက်ပြီး ဓါတ်ပုံရိုက်ခိုင်းတော့တာဘဲဗျာ။ တစ်ချို့ဆိုရင် ထမင်းစားပွဲမှာ တကယ့်အဓိကဧည့်သည်တော်တွေထိုင်တဲ့ ထိပ်ဆုံးထိုင်ခုံမှာနေရာချပေး၊ အရေးကြီးတဲ့ နိုင်ငံတော် အခန်းအနားဖွင့်ပွဲမှာ ဖဲကြိုးဖြတ်ပေးခိုင်းလို ခိုင်းနေရာပေးလိုက်ကြတာလေ၊ ဒါကလူကြီးကော၊ လူငယ်ကော၊ မိန်းမကြီးကော၊ မိန်းမငယ်လေးတွေကောဗျ၊သူဌေးကော၊ ကမ္ဘာကျော်မင်းသားကော ပြည်သူအရပ်သားကောဗျ၊ အားလုံးကတစ်ပုံစံထဲဆက်ဆံမှုတုန့်ပြန်မှုတွေတစ်ထပ်ထဲဗျာ။ မြန်မာပြည်ဆိုရင်တော့အရင်ကပေါ့ဗျာ၊ မင်းသားပါဆိုတော့ ပြုံးပြီးဓါတ်ပုံရိုက်ရင်ရိုက် အော်တိုထိုးခိုင်းရင်ခိုင်းပေါ့၊သုဘရာဇာဆိုတာနဲ့ မျက်နှာပျက်ပြီးနူတ်ခမ်းမဲ့ရွဲ့ပြီး ဝေးဝေးကိုရှောင်ထွက်သွားလေရဲ့၊ ဒါဟာပြည်ပနိုင်ငံနဲ့ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ မတူညီတဲ့ဆက်ဆံရေးပေါ့ဗျာ။ ဪ ၊ထေရဝါဒဗုဒ္ဓဘာသာတွေရဲ့နိုင်ငံမှာဘာဖြစ်လို့များဒီလောက်အယူသည်းကြပါလိမ့်လို့၊ ဒွိဟဖြစ်မိပါရဲ့ဗျာ ဆိုပြီး တော့ ရေးသားဖော်ပြထားပါတယ်၊ စာဖတ်ပရိတ်သတ်ကြီးများအတွက်ပြန်လည်ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်နော်။ Credit unicode ပရိတျသတျကွီးရေ၊ … Read more
ရွာထဲကို စစ်ကောင်စီတွေ ဝင်တုန်းကလည်း သူ့ပယောဂ မကင်းဘူး” ဟု…
မုံရွာမြို့နယ် ကြေးမုံကျေးရွာက စစ်ကောင်စီသတင်းပေး ဒလန်အမျိုးသား ပ.စ်သ. တ်ခံရ စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ မုံရွာမြို့နယ်၊ ကြေးမုံကျေးရွာအတွင်း နေထိုင်သော အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီသတင်းပေး ဒလန် ကိုဇော်စိုင်းသည် ယနေ့ အောက်တိုဘာလ ၉ ရက်နေ့ မနက်ပိုင်းက ဦးခေါင်းကို သေနတ်ဖြင့် ပ.စ်သ. တ်ခံရပြီး သေဆုံးသွားကြောင်း ဒေသခံများထံမှ သိရသည်။ ”ကြေးမုံရွာက အကြီးစားဒလန်ပါ။ ဒီနေ့ မနက် ၁၀ နာရီခွဲလောက်က South Monywa PDF နဲ့ Monywa Heroes Group မဟာမိတ်နှစ်ဖွဲ့ပေါင်းပြီး ကြေးမုံရွာမှာ နေထိုင်တဲ့ စစ်ကောင်စီသတင်းပေး အကြီးစား ဒလန် ဇော်စိုင်းကို အဲဒီရွာသွားတဲ့ ကားလမ်းပေါ်မှာပဲ MHG က ရဲဘော် နာရွှဲ့ဆွမ်က ဦးခေါင်းကို သေနတ်နဲ့ ပစ်ပြီး သုတ်သင်ရှင်းလင်းခဲ့တာပါ … Read more
မြန်မာအနုပညာရှင်တစ်ချို့ရဲ့ ကလေးဘဝအရွယ် ပုံရိပ်များ
မြန်မာအနုပညာရှင်တစ်ချို့ရဲ့ကလေးဘဝအရွယ်ပုံရိပ်များ ပရိတ်သတ်ကြီးရေ၊အခုတစ်ခါမှာဆိုရင်တော့မြန်မာအနုပညာရှင်တစ်ချို့ရဲ့ကလေးဘဝအရွယ်ပုံရိပ်များကို ပရိတ်သတ်ကြီးများအတွက်ပြန်လည်ဖော်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ချို့အနုပညာရှင်များကတော့ငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ်နဲ့ဘဲကြွေလွင့်သွားခဲ့ရပြီပဲဖြစ်ပါတယ်နော်။ သူတို့ကတော့အကယ်ဒမီဒွေး၊အကယ်ဒမီခိုင်နှင်းဝေ၊အကယ်ဒမီမင်းမော်ကွန်း၊ချစ်သုဝေ၊ ထပ်ဆင့်အကယ်ဒမီပြေတီဦး၊ထပ်ဆင့်အကယ်ဒမီအိန္ဒြာကျော်ဇင်၊ရေမွန်၊ဝိုင်းစုခိုင်သိန်း၊မေသက်ခိုင်။ အကယ်ဒမီပိုင်ဖြိုးသု၊ခင်ဝင့်ဝါ၊ထပ်ဆင့်အကယ်ဒမီဖွေးဖွေး၊ထပ်ဆင့်အကယ်ဒမီဝတ်မှုံရွှေရည်၊ သူဇာဝင့်လွင်၊နေဒွေးနဲ့ထပ်ဆင့်အကယ်ဒမီထက်ထက်မိုးဦးတို့ပဲဖြစ်ပါတယ်နော်။ credit unicode မွနျမာအနုပညာရှငျတဈခြို့ရဲ့ကလေးဘဝအရှယျပုံရိပျမြား ပရိတျသတျကွီးရေ၊အခုတဈခါမှာဆိုရငျတော့မွနျမာအနုပညာရှငျတဈခြို့ရဲ့ကလေးဘဝအရှယျပုံရိပျမြားကို ပရိတျသတျကွီးမြားအတှကျပွနျလညျဖျောပွပေးသှားမှာပဲဖွဈပါတယျ။ တဈခြို့အနုပညာရှငျမြားကတော့ငယျငယျရှယျရှယျနဲ့ဘဲကွှလှေငျ့သှားခဲ့ရပွီပဲဖွဈပါတယျနျော။ သူတို့ကတော့အကယျဒမီဒှေး၊အကယျဒမီခိုငျနှငျးဝေ၊အကယျဒမီမငျးမျောကှနျး၊ခဈြသုဝေ၊ ထပျဆငျ့အကယျဒမီပွတေီဦး၊ထပျဆငျ့အကယျဒမီအိန်ဒွာကြျောဇငျ၊ရမှေနျ၊ဝိုငျးစုခိုငျသိနျး၊မသေကျခိုငျ။ အကယျဒမီပိုငျဖွိုးသု၊ခငျဝငျ့ဝါ၊ထပျဆငျ့အကယျဒမီဖှေးဖှေး၊ထပျဆငျ့အကယျဒမီဝတျမှုံရှရေညျ၊ သူဇာဝငျ့လှငျ၊နဒှေေးနဲ့ထပျဆငျ့အကယျဒမီထကျထကျမိုးဦးတို့ပဲဖွဈပါတယျနျော။ credit
အကြွေးနွံထဲက မြန်မြန် ရုန်းထွက်စေနိုင်မယ့် နည်းလမ်း (၇) သွယ်
ယခုဝေမျှပေးသော အကြောင်းအရာလေးကို သဘောကျတယ်ဆိုရင် ပြန်လည် မျှဝေပေးဖို့အတွက် တောင်းဆိုပါရစေ ။ လူကြီး မင်းတို့ရဲ့ အားပေးမှုက ကျွန်တော်၊ကျွန်မတို့အတွက် ဆက်လက်ဝေမျှပေးဖို့အတွက် ခွန်းအားသစ်တွေရရှိပါတယ် ။ အကြွေးတင်နေတဲ့အခြေအနေမျိုးဆိုတာ တော်တော်လေး စိတ်ညစ်စရာကောင်းပါတယ်။ အကြွေးတင်သွားရင် ကိုယ့်ရဲ့ဝင်ငွေကို သေသေချာချာကောင်းကောင်းစီမံခန့်ခွဲပြီး စည်းကမ်းရှိရှိသုံးစွဲရင်းနဲ့ ပြန်ဆပ်နိုင်ပါတယ်။ တစ်ခါတစ်လေ တစ်စုံတစ်ခုကို စွန့်လွှတ်လိုက်ရတာမျိုးတောင် ရှိတတ်ပါတယ်။ အကြွေးပြန်ပြန်ဆပ်နေရတာနဲ့ တင် လိုချင်တာ မဝယ်ရ၊ စားချင်တာ မစားရ၊ သွားချင်တာ မသွားရ ဖြစ်လာပါတယ်။ အကြွေးပြန်ဆပ်တယ်ဆိုတာ ကိုယ့်အသုံးစရိတ်အစီအစဉ်ရဲ့ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း ဖြစ်တဲ့အတွက် အကြွေးပြန်ဆပ်ဖို့ ငွေကြေးစီမံတဲ့အခါ ငွေကြေးစီမံနည်း အဆင့် (၅) ဆင့် ကို အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ ငွေကြေးဆိုင်ရာ အထိန်းအကွပ်ပြန်လည် ရရှိဖို့အတွက် လုပ်ဆောင်နိုင်တဲ့ နည်းလမ်းတစ်ချို့ကိုလည်း ဖော်ပြပေးထားပါတယ်။ ၁။ … Read more
သင့်အိမ်ကို ကြွက်မလာအောင် ဒီနည်းကလည်း စာဖတ်ရင်း ရလာတဲ့ ဗဟုသုတပါ ။ စာမဖတ်၊ ဗဟုသုတ မရှာခဲ့ရင် ခုလို ကူညီနိုင်မှာမ ဟုတ် ။ယခုတင်ဆက်ပေးသော အကြောင်းအရာလေးကို သဘောကျတယ်ဆိုရင် ပြန်လည်မျှဝေပေးဖို့အတွက် တောင်းဆိုပါရစေ ။ လူကြီး မင်းတို့ရဲ့ အားပေးမှုတျွေက ကျွန်တော်၊ကျွန်မတို့အတွက် ဆက်လက်တင်ဆက်ပေးဖို့အတွက် ခွန်းအားသစ်တွေရရှိပါတယ် ။ အစားအစာ ရှိ တဲ့ နေရာမှာ ကြွက်တွေ ပျော်ကြပါတယ် ။ အထူးသဖြင့် ၎င်းတို့အတွက် အစားအစာ လွယ်ကူတဲ့ နေရာမျိုးဆို မိသားစုလိုက် အုပ်လိုက်ကျင်းလိုက် နေတတ်ပါတယ်။ ကြွက်က လူတွေအတွက် ကျန်းမာ ရေးကို ထိခိုက်စေနိုင်တယ်လို့ အား လုံးက သိပြီးသားပါ ။ အ ကုသိုလ် ကင်းကင်းနဲ့ အိမ်မှာ ကြွက် … Read more